★Indlela yokuphila yeTropical Morden★ [Iphuli & 5★ Ulwandle]
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNguyen
★ Indawo: Sonasea Villas and Resorts Complex. Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe (5ms) kunye neDowntown Centre (10ms). Iikhamera kunye noKhuseleko 24/24★ Izinto eziluncedo: Ipatimenti ene-morden funiture, ilanga elininzi, iintyatyambo kunye nemithi. ★ 5-star beach kunye neDynamic★Ukhenketho & namatikiti
(Kufuneka UFUNDE)50 sqm indawoNjengeqela leengcali zokuhlala kwiSixeko saseHo Chi Minh ixesha elide. Ngoku sithanda ukwazisa amagumbi amatsha kwisiqithi sasePhu Quoc esibizwa ngelinye igama elithi "Pearl Island"-indawo onokuthi ufumane enye yeyona ndawo ibalaseleyo yokutshona kwelanga eVietnam. Kwaye malunga neeNdawo ezijikelezileyo ngokubanzi:★ Ibekwe ngaphakathi kweSonasea Villas kunye neResorts Complex ezinezibonelelo ezahlukeneyo kunye nobunewunewu kwaye ijikelezwe ziihotele ezininzi ezinkulu kunye neeResort ezifana ne-NOVOTEL Villas kunye neHotele, BEST WESTERN VILLAGE resort, MUONG THANH hotel luxury, PARIS VILLAS kunye nokunye nangaphezulu. iihotele, i-spa, i-homestay★ Le ndawo inesitrato sayo sokuhamba kunye nokutya kwesitrato esinezinto ezahlukeneyo, isimbo kunye noluhlu. I-ATM ifumaneka 24/7. Indawo yeeteksi ngexabiso elifanelekileyo. IiVenkile ezifikelelekayo, iiNdawo zokutyela kunye neSpa, iiVenkile zeKofu zishinyene★Olunye uncedo olungcono lwale Complex lulwandle lweenkwenkwezi ezi-5, zonke iiNdwendwe ezifikayo zihlale zinokonwabela uLwandle olutofo-tofo olulawulwa kwaye luqhutywa nguNovotel kunye neLali eYona yasentshona. Oku kwenza ukuba ulwandle lwethu luhlale lucocekile kwaye luhle.
★★★★ Malunga neflethi ngokubanzi:★ Icocwe ngononophelo phambi kokuba ufike. ★ 24/7 inkonzo yokhuseleko. Ngena ngokulula ngeSmartlock. ★ I-AIR-CONDITIONED, kodwa ngamanye amaxesha asiyi kuyidinga kuba imozulu imnandi kakhulu. ★ Ibhedi yababini kunye nebhedi enkulu yomntu wesithathu★ Isantya esiphezulu SIMAHLA I-INTERNET kunye ne-Smart TV nge-YOUTUBE & NE-NETFLIX★ IiWadrobhe. ★ umgangatho wokhuni. ★ Umatshini wokuhlamba uyafumaneka eluphahleni.
★★★Malunga nekhitshi:★ Ifriji ephakathi ( 90 ilitha)★ IMicrowave★ Isitovu soMbane★ Iimela, iifolokhwe, icephe, isitya, njalo njalo...
★★★ Malunga negumbi lokuhlambela:★ Indlu yangasese, isinki kunye neshawari. ★ Iitawuli ezicocekileyo★ Ishampoo, ijeli yeshawa. ★Isepha★ Iphepha langasese★ IBHAFU (kuxhomekeke kuhlobo lwendlu)
★★★ I-Sonasea Villas kunye ne-Resorts Complex yenye yezona ndawo ziphakamileyo ze-Luxury Complex e-Phu Quoc ngaphandle kwegama elinye elikhulu njengeVinpearl, i-Sun World, i-Movempick, kodwa ingekude kakhulu nabantu basekhaya.
★★★ Nceda uyiphathe njengekhaya lakho. Njengoko sikuphatha njengelungu losapho;)
★Ummelwane wethu zezinye iiHotele kunye ne-Spa kunye neendawo zokutyela. Ke siyazi ngokupheleleyo ukuba sihlala kudidi oluphezulu, indawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo.
★Izibane zesitalato, iiCamera ecaleni kwezinyuko-Ouside kunye noKhuseleko Guard luyafumaneka 24/24.
Umbuki zindwendwe ngu- Nguyen
Ngexesha lokuhlala kwakho, siqinisekisa ukubonelela ngenkxaso kunye nokufumaneka kwe-24/24 ukunika konke okudingayo ngokusemandleni ethu.Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi kuWhatsapp, Viber, Imess, Zalo, Wechat, Kakao Talk, Air BnB ngokunjalo.
Ngexesha lokuhlala kwakho, siqinisekisa ukubonelela ngenkxaso kunye nokufumaneka kwe-24/24 ukunika konke okudingayo ngokusemandleni ethu.Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi kuWhat…